ANTENIMIERAM-PIRENENA : Nanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany, voahaja ny fepetra ara-pahasalamana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly teny amin’ny CCI Ivato ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena. 6 mai 2020
Ny filohan’ity andrim-panjakana ity, ny Depiote Christine Razanamahasoa no nanokatra izany. Tonga teny an-toerana nanatrika ny fanokafana ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta Ntsay Christian, ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao, ny filohan’ny Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy Maka Alphonse sy ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila.
Nanantitra ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Chrisitine Razanamahasoa fa noho ny hamehana ara-pahasalamana dia nafindra teny amin’ny CCI Ivato ny fivoriana. Tsy maintsy hajaina avokoa mantsy ny fepetra rehetra napetraky ny Fanjakana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Nisy, hoy izy, ny fivorian’ny birao maharitra talohan’ny nandraisana ity fanapahan-kevitra ity nentina nametrapetrahana ny tokony hatao tsy hiparitahan’ny valanaretina. "Noho ny faneren’ny Lalàmpanorenana azy dia tsy maintsy miasa ny solombavambahoaka. Izany rahateo no nifidianan’ny vahoaka azy. Tsy maintsy nojerena avokoa anefa ireo pitsopitsony ara-pahasalamana rehetra satria mbola ao anaty hamehana ara-pahasalamana tanteraka i Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Miatrika ady isika amin’izao fotoana izao ary ny fahavalo dia tsy hita maso. Mila fahamalinana izany", hoy ny nambarany.
Tsiahivina hatrany fa araka ny andalana faharoa amin’ny andininy faha-75 amin’ny Lalàmpanorenana dia mivory ara-potoana voalohany ny Antenimieram-pirenena ny talata voalohany amin’ny volana mey, ary maharitra 60 andro izany. Anisany asa miandry ny solombavambahoaka amin’izao fotoana izao ny fandaniana ireo lalàna tsy mbola lany tamin’ny taona 2019.
Eo koa ny fandaniana ny volavolan-dalàna nasiam-panitsiana ho an’ny taona 2020, fankatoavana ireo volavolan-dalàna nifandresen-dahatra tamin’ny Antenimieran-doholona sy notsipahan’ity andrim-panjakana ity ary ny famenoana ny toerana banga ao amin’ny Céni. Mahakasika ity farany, hisy fifidianana izay hasolo an’i Thierry Rakotonarivo tsy maintsy hataon’ny solombavambahoaka. Hisy koa ankoatra ireo ny fihaonana depiote amin’ny masoivoho avy any ivelany. Anisan’ireo masoivoho fantatra fa hizara ny traikefany amin’ireo solombavambahoaka ireto ny masoivohon’i Alzeria. Hizara ny traikefany sy ny tolona nataony nahazoany ny fahaleovantenany ity farany.